Ndinqwenela ukuba abathengisi bayeke ukuthetha le nto ... | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 7, 2015 NgoLwesihlanu, Februwari 2, 2018 Douglas Karr
Mna noJenn sityelele ikomkhulu lase Imfuza kule veki kwaye bahlala phantsi kwiqela labo lentengiso yedijithali kwaye omnye wemibuzo ovelayo kukuba ngaba sikhe sabeka i-infographic emva kobhaliso. Saphendula ngokukhawuleza ukuba asizange senze loo nto ngaphambili. Iqela elidibeneyo lathi benze uvavanyo ngazo zombini mhlophe kwaye kwi-infographic kwaye i-0% ibhalise kwaye ikhuphele iphepha elimhlophe kwaye i-100% ibhalisiwe ukujonga i-infographic.
Ndiyakuthanda kakhulu xa sidibana namaqela aphikisana nenqanaba langoku kwaye avavanye into enje. Kubaluleke kakhulu ukuba thina, njengabathengisi, siye ngokuchasene nendalo yethu okanye iindawo zentuthuzelo kwaye senze inkuthalo yethu yokuvavanya yonke imeko.
Kule veki, Ukufikelela kwiForce bakhuphe udliwanondlebe abalwenzileyo nam Idatha enkulu kunye nentengiso kwaye esi sisihloko endisithandayo. Ngedatha enkulu, abathengisi banokubonakaliswa ngedatha yexesha lokwenyani nge-4 V's ... ivolumu, iintlobo ezahlukeneyo, isantya kunye nokunyaniseka. Akukho sizathu sokuba abathengisi abanezixhobo zokuvavanya kunye nokulinganisa zonke unxibelelwano kule mihla.
Ingxelo endinqwenela ukuba abathengisi bayeke ukuthi,
Sizamile lonto ayasebenza.
Ndiyabuza umbuzo wabo wazama kunye nombuzo wabo ayisebenzi. Sasinethemba elinye, njengomzekelo, elathi abayenzi i-SEO kuba onke amathemba abo avela kuFacebook. Ndibuze ukuba balubeka phi lonke uhlahlo-lwabiwo mali… hayi ngokumangalisayo yonke loo nto ibikuFacebook. Ewe, oko akuthethi ukuba uphando lwezinto eziphilayo aluzange lusebenze, kuthetha nje ukuba izixhobo zazingasetyenziswanga ukuvavanya ngokwenene kwaye ubone ukuba kukho i-ROI efanelekileyo. Lowo ngumahluko omkhulu.
Ecaleni kwale ngxelo kukho abanye:
Sifumana lonke ishishini lethu ngokuthumela kunye nelizwi lomlomo.
Imidiya yokuncokola ayisebenzi.
Asinalo ixesha lokuphuhlisa umxholo.
Uphando oluncinci kule nto lufumanisa ukuba indawo ayifumaneki kukhangelo, akukho zicwangciso zomxholo, ulwazi loqhakamshelwano olungekhoyo okanye ifom engasebenziyo kwiwebhusayithi, akukho nkqubo yentengiso ye-imeyile…. Akumangalisi ukuba lonke ishishini lakho lize ngokudluliselwa kunye nelizwi lomlomo! Ayikho enye indlela yokwenza ishishini nawe kwi-Intanethi!
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, bendingakhalaza ukuba ingxaki nge kubahlalutyi kukuba kuphela kukrelekrele njengoko umsebenzisi enamava kwaye ephucukileyo ukuyisebenzisa. Sebenzisa ingxelo ngaphandle kokumba nzulu, kwaye unokwenza izigqibo ezimbi usebenzisa kubahlalutyi. Ukwenza izigqibo ezizizo kufuna ukuphunyezwa okuqinileyo kwe kubahlalutyi kunye nokusombulula idatha kufuna amava. Uhlalutyo sisixhobo esihle se kubuza imibuzo, kodwa sisixhobo esibi se ukufumana iimpendulo.
Idatha enkulu, amaQonga oLawulo lweDatha, iiDashbhodi, kunye nezinye izixhobo ngokwenene ziye ngaphambili. Ukufikelela kwiForce ilungisa iingxaki zedatha yemibutho ngokucoca idatha yazo-ukukhutshwa kwezinto ngendlela enye, ukumiselwa komgangatho, ukubekwa emgangathweni oqhelekileyo, ukulungiswa kunye nokuqinisekiswa- ngokuzenzekelayo nangokuqhubekayo. Yonke into oyifunayo ukuqala ukulinganisa ngokufanelekileyo kunye nokwenza amaphulo amahle okuthengisa ngoku iyafumaneka.
Inkampani enomdla endisandula ukudibana nayo ibiyi Imbono yoontanga -Abamisa uphawu lwenkxaso mali yonke yequmrhu ngokuchasene nezinto ezinje ngemizamo yabo yokuthengisa ukuze babone ukuba bakwalatha njani xa kuthelekiswa nokhuphiswano lwabo kunye nomzi mveliso. Khawufane ucinge xa ​​ukwazi ukubonisa ibhodi yakho ukuba inkcitho yakho yentengiso iphantsi komndilili okanye iindleko zakho zokhokelo kunye nokukhula kungaphezulu kweshishini! Ezi zisombululo ziyafumaneka kuthi ngoku.
Yintoni engekhoyo, nangona kunjalo, italente kunye nezixhobo zokusebenzisa itekhnoloji.
Italente kunzima ukuyifumana kunezixhobo. Ukuba nabahlalutyi bezentengiso abakwaziyo ukuvavanya ngokufanelekileyo, ukulinganisa kunye nokwenza uqikelelo kuya kusiba nzima kunakuqala. Udliwanondlebe lweReachForce
Sisebenza neenkampani zokubonisana ezifana Perscio, Abaphuhlisa iimodeli ezichanekileyo ngokumangalisayo kuhlalutyo lwentelekelelo abaza kuthi abathengisi bakwazi ukuyisebenzisa ukuqonda ngcono ukuwela kwabo ijelo lomjelo ukuze babone ukuba utshintsho kutyalo-mali lwabo lokuthengisa luza kuchaphazela njani iziphumo ngokuchaneka okumangalisayo.
Inani elothusayo leenkampani esidlan 'indlebe kunye nathi kwaye aziyi kusebenza kwaye, endaweni yoko, zisathengisa ukusuka esinqeni. AyingooMama kunye neePops… ezinye zazo ziinkampani zeFortune 500. Bayaziphepha iindlela zokulinganisa eziqinisekisiweyo kunye neenkqubo zokulinganisa eziza kuphucula izigqibo zabo zokuthengisa kuba kwa ezi nkqubo zikwabonelela ngemilinganiselo yokuphendula. Luhlobo lwabaphethe i-nitpick kwindlela ejongeka ngayo okanye evakala ngayo, ngokuqhubekayo ilibazisa ukwenziwa kwesicwangciso kunye ukulinganisa ifuthe kuba abanalo nofifi lokuba luza kusebenza njani.
Njengabathengisi, sinokwenza ngcono. Kufuneka senze ngcono. Izixhobo zikhona!
tags: idatha enkuluintengiso yomnqamlezoukucoceka kwedathaamaqonga olawulo lwedathadmpingqondo esebenzayoAbathengisiizizathu zokuthengisaukujonga ngaphambiliPerscioukufikelelaKuthetha
Ngaba isiCwangciso seQhinga lakho leMveliso, uBukho okanye iGunya?
Meyi 7, 2015 kwi-10: 11 AM
AMEN! Ngokudabukisayo ndiva oku ngamaxesha onke. Sizamile kwiminyaka elishumi eyadlulayo kodwa ayisebenzi. Ndiyiva rhoqo kubantu abasebenze kule nkampani iminyaka eyi-10 +. Senza njani ukuba abantu bajonge phambili kwaye bangabuyi mva? Okanye uthembe ukuba izimvo ezintsha zinokuguqula umbono wakudala ube lolungileyo?
Meyi 11, 2015 kwi-3: 21 PM
“Akumangalisi ukuba lonke ishishini lakho lize ngokudluliselwa kunye nelizwi lomlomo! Ayikho enye indlela yokwenza ushishino nawe kwi-intanethi! ”
Oku! Oku! Oku kusisigidi!
Ndivile abaphathi abangenakubala bezithoba kum ngemigca malunga nokuba ayisebenzi njani kushishino lwethu. Ama-98% eshishini lethu avela kubizo olungenabubele. ”
Ewe… Xa unikezela nge-98% yohlahlo-lwabiwo mali lwe-gen yakho kwiziko lokufowuna, oko kudla ngokwenzeka.
UDoug-Ukhe wakuthathela ingqalelo ukwenza ikhosi esisiseko kwindlela i-intanethi ekhokelela ngayo kwishishini? Ngenani labaphathi abangaziqondiyo iziseko, ndicinga ukuba uza kubulala! 🙂
Jan 31, 2018 ngo-5: 17 PM
Eli nqaku linxibelelana ne-Interactive Intelligence, eyathengwa nguGenesys ngoDisemba 2016. Ngolwazi oluthe kratya malunga nokufunyanwa, nceda undwendwele: https://www.genesys.com/inin